Diyo post :: टानका अध्यक्ष नवराज दाहाल भन्छन्,‘पर्यटकमाथि हेलिकोप्टरको मनोमानी शुल्क रोक्छु’ टानका अध्यक्ष नवराज दाहाल भन्छन्,‘पर्यटकमाथि हेलिकोप्टरको मनोमानी शुल्क रोक्छु’ - Diyo post
ट्रेकिङ व्यावसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसियशन अफ नेपाल (टान)को ३९ औं साधारणसभाबाट पुराना पर्यटन व्यावसायी नवराज दाहाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच बनेको गणतान्त्रिक गठबन्धनबाट उनी टानको अध्यक्षमा निर्वाचत भएका हुन् । यसअघि टानको कार्यसमिति सदस्य, महासचिव लगायत पदमा समेत कार्यरत रहिसकेका दाहाल अनुभवि पर्यटन व्यावसायी हुन् । उनले आफूले नेतृत्व लिएपछि टानलार्इ नयाँ गतिमा अगाडी बढाउने दाबी गरेका छन् । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनका आगामी योजनाबारे दियोपोस्टले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत त दाहालसँग गरिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता :
समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको टानमा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । के कस्ता योजना छन् ?
धेरै व्यावसायीले टान निकै समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बताएका छन् । केहीले यसलाई ‘कोमामा छ’ समेत भनिरहेका छन् । म निर्वाचित भएपछि टानलाई कोमाबाट निकाल्छु । टानलाई धेरैले राजनीतिको थलो पनि बनाएका छन् । राजनीतिबाट मुक्त गराउँछु र व्यावसायीक गतिविधिमा मात्रै टानलाई जोड्नेछु ।
तपाईं स्वयंम राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनु भएको छ । यसलाई कसरी मुक्त बनाउनु हुन्छ ?
मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि छ तर, म लामो समयदेखि यो व्यावसायमा छु । व्यावसायीका चुनौती र समस्या मलाई थाहा छ । म पूर्णकालिन राजनीतिमा छैन । म विशुद्ध ट्रेकिङ व्यावसायीको प्रतिनिधीत्व गरेर गएको हुँ । मेरो समस्या समाधानका लागि पनि टान आवश्यक पर्छ ।
विगतमा पनि टानको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुथ्यो । के–के समस्याहरु देख्नु भएको छ ? कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?
यहाँ धेरै समस्याहरु छन् । गह्रकानुनी ढंगका व्यावसायहरु छन् । पर्यटकहरु आफू खुसी जान्छन् । गाइड वा पोर्टर लिएर जाँदैनन् । जसले गर्दा नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त कम्पनीहरु दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । एनजिओ आइएनजोले ट्रेकिङ चलाइदिएका छन् । रोजगारी घट्दै गएको छ । कानुनको दायरामा सबैलाई ल्याउनु पर्छ । गह्र कानुनी ढंगले चलेका पदयात्रा व्यावसायलाई नियन्त्रित गरिनुपर्छ ।
नेपाल सरकारका निकायहरु जसले पर्यटन क्षेत्रमाथि निर्देशन तथा नियमन गर्नुहुन्छ । हामीले उनीहरुलाई खाका दिने हो । व्यावसायीको नेतृत्व गरेर टानले दबाव दिने हो । म त्यो दबाव सिर्जना गर्छु ।
मुस्ताङ, मनास्लु, मार्फा लगायत नियन्त्रित र निर्देशित क्षेत्रमा पदयात्रीहरुले ट्रकिङ जान निश्चित समयको लागि परमिट बनाउनुपर्छ । मुस्ताङमा जानुपर्दा न्युनतम १० दिनको ट्रेकिङ परमिट बनाउनुपर्छ । १० दिनका लागि ५ सय डलर तिर्नुपर्छ । एकजना पर्यटकले आफू खुसी गाइड वा पोर्टर लिएर जान पाउँदैन । नियममा दुई जना हुँनैपर्छ । यो धेरै अगाडीको नियम हो । तर, व्यबहारिक छैन । जतिदिनको लागि ट्रेकिङ जाने हो त्यति दिनकै परमिट बनाउने र शुल्क घटाउने काम गर्नुपर्छ । धेरै पर्यटक त्यहाँ जान्छन् । एक जना गाइड र पोर्टर लिएर जान पाउने बनाउँनुपर्छ । यसको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु । समय अनुसार नियम बदल्न हामी प्रयास गर्नेछौँ ।
अहिले ट्रेकिङ रुटहरु नष्ट हुँदै गएको छ । मोटर बाटोको बृद्धिले गर्दा यस्तो भएको हो । मोटर बाटो वृद्धि हुनु राम्रो हो । तर, हाम्रो व्यावसाय यहाँ जोडिएको हुन्छ । हामीले संभावित नयाँ ट्रेकिङ रुटहरुको खोजी गर्ने हो । नयाँ रुटहरुको खोजी गरेर प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा हामी लाग्नेछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्थरको ट्राभल मार्ट हामी टानकै आयोजनामा गर्नेछौँ । त्यसोगर्दा आम ट्रेकिङ व्यावसायीले आफ्नो व्यावसायको प्रचार गर्न नेपालमै अवसर पाउँछन् । विदेश गएर प्रचार गर्न सबैले सक्दैन । भाषिक समस्या लगायत कारणहरु छन् । सम्पर्कको अभाव र भूगोलको पहिचान नहुनाले पर्यटन व्यावसायीले प्रचार गर्न सकिरहेका छैनन् । आर्थिक समस्याहरु छन् ।
व्यावसायीहरुलाई भ्याटको समस्या छ । भ्याट केमा लाग्ने केमा नलाग्ने भन्ने कम्फ्युजन छ । ‘क्लाइम्भिङ परमिट’ र ट्रेकिङ प्रमिटको फि महँगो छ । यदि सरकारले क्लियर गरेन भने व्यावसायीहरु मर्कामा पर्छन् । म कार्यदल बनाएर व्यावसायीको हक हितका लागि पहल गर्छु ।
मजदुरका समस्या छन् । मजदुर र व्यावसायीबीच ठूला द्वन्द हुने अवस्था छ । त्यसलाई हल गर्नेछु । गह्रकानुनी ढंगले व्यावसाय सञ्चालन गरेको छ । मजदुरलाई भनेजति रोजगारी र पारिश्रमिक दिइएको छैन । सुविधा पनि नदिएपछि द्वन्द भइहाल्छ । मजदुरको सुरक्षा छैन । मजदुरको इन्सुरेन्स र रेस्क्यु टानले गर्नेछ । सबै कम्पनीको सहयोगमा टानले त्यो जिम्मा लिन्छ । किनभने टान भनेको स्थापित संस्था हो ।
मजदुरसँग आवश्यक सामग्री नहुनसक्छ । ३ हजार मिटरभन्दा माथि जाँदा हिउँ पर्नसक्छ । विभिन्न समस्याहरु आउनसक्छन् । यस्तोमा टानले आवश्यक सामग्री वितरण गर्न पहल गर्न सक्छ । मजदुर सेल्टर निर्माण गर्ने योजना छ । मजदुर वेलफियरको कुरा पनि हामी लागु गर्छौं ।
तपाईंको कार्यकाल जम्मा २ वर्ष मात्रै हो । टान अहिलेपनि कोमामा नै छ । यस्तो अवस्थामा यस्ता सपनाहरु पुरा होलान् र ?
असंभव भन्ने दुनियामा केही हुँदैन । संभव बनाउने कुरा हो । टान आफैमा स्थापित संस्था हो । टानसँग स्रोत छ । हामी लिएर आउँछौँ । टिम्सको एउटा हिस्सा टानले पाउँछ । टिम्सका केही समस्याहरु छन् । यसलाई हामी समाधान गर्छौं ।
टिम्स कार्डमा विगतमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएका दृष्टान्तहरु छन् । टानले जति पाउनुपर्ने हो । जुन शिर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हो त्यहाँ खर्च हुन्छ । आर्थिक पारदर्शीताको कुरापनि छ ।
टिम्स कार्डमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियमन गर्ने हिम्मत गर्नुहुन्छ ?
विगतका कमजोरीहरु हामी अध्ययन गर्छौं । एउटा कार्यदल बनाएरै अध्ययन गर्छौं । अहिले हामी पारदर्शीता नै गर्छौं । शिर्षक अनुसार विधि पुर्याएर आवश्यकता अनुसार मात्रै खर्च गरिन्छ ।
पर्यटकहरुलाई इन्सुरेन्सको नाममा हेलिकोप्टर कम्पनीहरुले ठगी गरिरहेका छन् । अनावश्यक रुपमा हेलिकोप्टर र अस्पतालहरुले शुल्क तिराई रहेका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन ‘डेन्जर जोन’मा परेको अवस्था छ । यसको समाधान के हो ??
यसलाई रोकिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि हामी एउटा समिति बनाउँछौँ । सबै हेलिकोप्टर अपरेटरहरुलाई बोलाएर एक पटक छलफल गर्छौं । हेलिकोप्टरको दरभाउ निर्कौल गर । घण्टामा हुने हो वा क्षेत्रको आधारमा हुने हो ? हेलिकोप्टर प्रमोटरलाई कति प्रतिशत कमिशन दिन्छौ ? त्यो पनि निश्चित गर । त्यसो भयो भने विमासँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसको जिम्मा टानले लिन सक्छ । त्यसो भएपछि चिटिङ हुँदैन । केही अस्पतालहरु जसले विदेशीलाई रेस्क्यु पछि उपचार गराइरहनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि बोलाउँछु । उहाँहरुले पनि नेपालको ‘इमेज’ नविगारी काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुले आफ्नो अस्पतालमा क्लाइन्ड ल्याइन्छ भनेर मनोमानी बिल बनाउनु हुन्न । यसले राम्रो म्यासेज जाँदैन । यदि उहाँहरुले हाम्रो अनुरोध मान्नु भएन भने राज्यसँग सहयोग लिएर अस्पतालको मनोमानी नियन्त्रण गर्छौं । एउटा व्यावसायले अर्को व्यावसायमाथि हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन ।
व्यावसायीबीच अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा छ । कसरी समायोजन हाेला ?
यहाँ रातारात यस्ता कामबाट करोडपति बनिरहेका छन् । यसले विकृति बढाउँछ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने छौँ । गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउने प्रयास गरौँ । राम्रो सेवा दिने काम गरौँ । आफ्ना कर्मचारीलाई उचित सेवा सुविधा दिने काम गरौँ । गाईड र पोर्टरको पनि तालिम गर्नेछौँ । दक्ष जनशक्ति भयो भने राम्रो हुन्छ ।
तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरु जो तपाईंसँग पराजित भए उनीहरुलाई पनि सँगै लिएर जाने विषयमा के सोच्नु भएको छ ?
धेरै साथीहरु मेरै समुहबाट निर्वाचित हुनुभएको छ । केही साथीहरु अर्को विचार समुहबाट निर्वाचित हुनुभएको छ । सबैसाथीहरु व्यावसायमा हुनुहुन्छ । आस्था र विचारको आधारमा विभाजित भएर हुँदैन त्यसलाई तोड्नुपर्छ एकताबद्ध भएर जानुपर्छ । यो जीत मेरो मात्रै होइन । यो सबैको जीत हो । हामी प्रजातान्त्रिक ढंगले हार वा जीतमा पुगेका हौँ । सबैले एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ । म उहाँहरुसँग मिलेर काम गर्छु । मोहन लम्साल जी जसले अर्को समुहको नेतृत्व गर्नु भएको छ । नुर्जाम्बु पनि अध्यक्षमा उठ्नु भएको थियो । उहाँहरुलाई मैले भनेको थिएँ,‘जसले जितेपनि एक अर्कालाई सहयोग गरेर जानुपर्छ ।’ उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ । मलाई विश्वास छ सबै एक ढिक्का भएर टानको हितमा काम गर्न पाउँछौँ ।
टानका पूर्व अध्यक्षहरुको इतिहास हेर्दा, कतिपयले यसलाई राजनीति गर्ने ‘ब्याकबोन’ बनाएको देखिन्छ । तपाईंको पनि राजनीतिक स्टेप लिने योजना छ कि ?
टानमा गएर राजनीतिक ‘क्यारियर’ बनाउन आवश्यक छैन । यो व्यावसायमा पहिल्यैदेखि चिनिएको मान्छे हुँ । राजनीतिक रुपले पनि मैले एउटा उचाइ हासिल गरिसकेको छु । टानको नाम लिएर राजनीति गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।